"Licike" uNyazi ibhanoyi ebelindiza eBuhleni | Ilanga News
Home Izindaba “Licike” uNyazi ibhanoyi ebelindiza eBuhleni
Kuthiwa kukhona abesebesolwa ngokubiza amaphoyisa ngenxa yokugcwala kule ndawo
INENGEKE yakhipha isiqalekiso iNkosi yamaNazaretha aseBuhleni, uMduduzi “Nyazi-lwezulu” Shembe ngenxa yebhanoyi okuthiwa belindiza phezu komuzi waseBuhleni kunesikhumbuzo sikayisemkhulu, iNkosi Amos “Nyangayezulu” Shembe ngoLwesine, okuphoqeleke ukuba ivale inkonzo kungakafaneli.
Kuthiwa okunenge inkosi wukuthi bekusolwa ukuthi ibhanoyi ngelamaphoyisa, libizwe ngabathile ngoba bebona ukugcwala ngokweqile kwabantu, obekuhambisana nokwephula imigomo yezokuphepha kwiCoronavirus kanti lithungatha imoto ebihamba ilungu lebandla.
Le moto kuthiwa leli lungu lebandla beliyithathe lapho lisebenza khona, kodwa langabika, okudale ukuba inkampani yesiqophamkhondo (tracker) ithumele ibhanoyi ukuba liyithungathe.
Imithombo yeLANGA engashayi eceleni, ithi leli bhanoyi ebelilokhu lizulazula phezu kwamakhanda abantu, likhathaze inkosi, yavala umhlangano.
“Indlela inkosi ebinengeke ngayo, ize yakhipha isiqalekiso yathi: ‘Lo olibizile umhlabathi uyomphika ngisho engasekho emhlabeni. Le nto yami ngayilanda ezulwini ngemukeliswa ngobaba, ngeke nilunge futhi lo ozama ukucima lo mlilo kuyomane kucime yena.
‘Uma nicabanga ukuthi leli bhanoyi enilibizile liyangethusa, nishaye phansi, kalingithusi ngoba umkhulu wayehamba ngalo’,” kusho lo mthombo.
Umthombo uthi inkosi ize ingena kuleli hlazo nje, indaba iqalwe ngamakhosi abelokhu ethi kukhona umfundisi obonakale efonela amaphoyisa kwelinye idokodo.
“Kuleli bandla kanti kuyoze kube yinini amakhosi eqhatha abantu abangenacala? Kunabefundisi abahleli emakhaya abangasasonti ngoba bamiswa yila makhosi akhonza ebandleni angamaxoki.
“Inkosi yesizwe enjani eqhatha abantu? Ukube lo mfundisi obesenukwa ngokufonela amaphoyisa abantu bamshayile, abezojabula yini la makhosi ngokufafaza into angenasiqiniseko sayo?
“Sengathi nomnyango wezokubusa ngokubambisana nezomdabu ungake uyibheke le yamakhosi aqhatha abantu, akhishwe ezikhu-ndleni,” kusho lo mthombo.
Okhulumela amaNazaretha aseBuhleni, uMnu Thokozani Mncwabe, uthe akavumelekile ukuphawula ngentshumayelo yangaphakathi ebandleni.
“Kungamampunge ukuthi besibaningi ngokweqile. Siyibandla siyayigcina imithetho ebekwe wuhulumeni, nasemathempelini isibalo sabantu siba sincane ukwenzela ukuthi bakwazi ukuhlala ngokuqhelelana futhi bangabi baningi kakhulu,” kusho uMnu Mncwabe.
Uthi uzwile ngebhanoyi ebelindiza phezu komuzi waseBuhleni kodwa ubengakafiki ngaleso sikhathi. Kule yokukhishwa kwesiqalekiso, uthe inkosi inelungelo lokukhuluma noma yingani ebandleni, ingakhipha isibusiso iphinde iqalekise.
“Ngizwe kamuva nami ukuthi ibhanoyi belifuna imoto yenkosana, kodwa kangifuni ukungena ngigxile kulokho ngoba ngizwe ngosizwile, akukho sitatimende esenziwe,” kusho uMnu Mncwabe.
Previous articleUzovela namuhla umsolwa (15) kwelokubulala ingane (4)
Next articleI-Downs iqashe umngqithi nomokwena kwesokuqeqesha
Ugeqa amagula umndeni woboshwe kwelikaSenzo
Bathuka izanya abahlaselwe yiqembu lemigulukudu
01 November 2020 31st Oct 2020
Ugeqa amagula umndeni woboshwe kwelikaSenzo 29th Oct 2020
Umzali uyavutha ‘kuhlazwa’ ingane yakhe 29th Oct 2020
Bathuka izanya abahlaselwe yiqembu lemigulukudu 29th Oct 2020
Ubalisa ngesifo esihlasele iChiefs 29th Oct 2020